आफ्नो घरको वाईफाई स्पिड कसरी बढाउने ?
आईसिटी समाचार आइतबार, ९ जेठ, २०७८
अहिले महामारीको समयमा हामी सबैलाई इन्टरनेटको खपत एकदमै बढेको छ । अध्ययन अध्यापनदेखि काम गर्नसम्म सबैको लागि इन्टरनेट राम्रो हुनु एकदमै महत्वपूर्ण छ ।
आज सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो घरको वाईफाई स्पीड कसरी बढाउने भन्नेबारे हामी चर्चा गर्दै छौं ।
आफ्नो राउटरलाई खुल्ला ठाउँमा वा घरको प्रमुख तल्लामा राखेमा ईन्टरनेटको स्पीड बनाउन सकिन्छ ।
धेरै सामान, भित्ताहरुले गर्दा पनि वाईफाई सुस्त हुने गर्दछ । राउटरलाई भुँइमा भन्दा पनि कुनै फर्निचरको माथि राख्दा राम्रो हुने गर्दछ । कर्डलेस फोन, माइक्रोवेब जस्ता विद्युतिय उपकरणहरुबाट हामीले सम्भवत राउटरलाई टाढा राख्नुपर्छ । राउटरको एन्टीनालाई पनि परपेन्डिकुलर (९० डिग्री), एउटालाई तेस्रो र अर्काेलाई ठाडो बनाएर राख्दा राम्रो हुन्छ ।
तपाईको घरमा वायरलेस डेडस्पट भेट्याउनका निम्ति क्लाउडचेक जस्ता मोबाइल एपलाई प्रयोग गरेर परिक्षण गर्न सकिन्छ । यसले तपाईको घरमा सिग्नल सबैभन्दा राम्रो कहाँ आउँछ भनेर देखाउने गर्दछ र तपाईले त्यहीनै राउटर राख्न सक्नुुहुनेछ ।
२. नौलो वाईफाई प्रविधिको प्रयोग
प्रविधिहरु प्रिवर्तन भईरहेको हुन्छ । वाईफाई स्पीड बढाउन सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको नयाँ हार्डवेयर प्रयोग गर्नु हो । पुरानो वायरलेस मोडेलभन्दा नयाँ माडेलहरु तीन गुणा राम्रो चल्ने गर्दछ ।
३. डिभाइस सिमीत गर्ने र सेटिङ्गलाई अप्टीमाइज गर्ने
धेरैजसो राउटरहरुमा क्वालिटी अफ सर्भिस भन्ने सेटिङ्ग रहेको हुन्छ । यसले कुन एपलाई ईन्टरनेट ब्याण्डविथको पहुँच दिने भनेर छुट्याउन सकिन्छ ।
उदाहरणको रुपमा तपाईको कुनै फाइल डाउनलोड भईरहँदा कुनै महत्वपूर्ण वेबिनारमा जोडिनु परेमा यसले धेरै प्राथमिक्ता कललाई दिन्छ । यस्तोमा फाइल त तपाईले पछि पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तर सुरुमा के महत्वपूर्ण छ त्यसलाई प्राथमिक्ता दिएर काम गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै वायरलेस राउटको फर्मवेयर र ड्राइभरमा पछिल्लो अपडेट गरिएको छ की छैन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ । यसको लागि राउटर सेटिङ्गमा गएर म्यानुअली अपडेट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वाईफाई एनालाईजर वा वाईफाइ स्कयानर प्रयोग गरेर वाईफाईको च्यानेल तपाईको छिमेकी भन्दा भिन्न पार्न सकेमा पनि ईन्टरनेटको स्पीड राम्रो हुने गर्दछ ।